पोको एक्स–३ प्रो सार्वजनिक, कतिपर्छ मूल्य? | Artha News Nepal
Home	सुचना-प्रविधि	पोको एक्स–३ प्रो सार्वजनिक, कतिपर्छ मूल्य?
by अर्थन्यूज जेष्ठ ३, २०७८
शाओमी नेपालले पोको एक्स–३ प्रो सार्वजनिक गरेको छ। यस स्मार्टफोनमा विशेषगरि गेमिङलाई प्राथमिकता दिइएको कम्पनीले बताएको छ।यसमा फ्ल्यागशिप प्रोसेसर, स्न्यापड्रागन ८६० र चिपसेट छ। यसमा ८ कोर चिपसेट ७ न्यानो मिटरको प्रोसेसिङ्ग टेक्नोलोजी जडान गरिएको छ।शक्तिशाली एड्रेनो ६४० जीपियुको ग्राफिक्स प्रोसेसरले बिना कुनै अवरोध बजारमा उपलब्ध भएको सबै गेम खेल्न सकिन्छ।
यसमा ६.६७ इञ्चको फूल एचडी प्लस डिस्प्ले दिइएको छ। फोनको सुरक्षाको लागि कर्निङ्ग गोरिल्ला ग्लास प्रयोग गरिएको छ। पोको एक्स ३ प्रोमा चार क्यामार छन्। जसमा ४८ एमपी वाइड, ८ एमपी अल्ट्रा वाइड, २ एमपी म्याक्रो२ एमपी डेप्थ सेन्सर छ।सेल्फीका लागि २० एमपी लेन्स छ।
जसले प्राकृतिक दृश्यलाई कब्जा गरी प्रयोगकर्ताहरुलाई राम्रो सेल्फी र फोटो खिच्न मद्दत गर्दछ।
फोनमा भिडियो जुम, फोकस पिकिङ्ग लगायतका विभिन्न फिचर्सहरु छन्। यसमा विशाल ५१६० एमएएच ब्याट्री छ। यो उपकरणमा इन–बक्स फास्ट ३३ डब्लु टाइप–सी चार्जर पनि छ। यसले २६ वाटको युएसबी पीडी चार्जलाई सपोर्ट गर्छ।
फोनमा दुईवटा स्टेरियो स्पिकर छ। यसले प्रयोगकर्तालाई ठूलो र स्पष्ट आवाज दिन्छ।
पोको एक्स–३ प्रो तीन वटा विविध रंगहरुमा उपलब्ध हुनेछन् ती ग्राफाइट ब्ल्याक,स्टील ब्लु र गोल्डेन ब्रन्ज हुन्। यो ६ जिबी/१२८ जिबी र ८ जिबी/२५६ जिबी गरी दुई क्षमतामा उपलब्ध छ। यिनीहरूको मूल्य क्रमशः ३१ हजार ९ सय ९९ र ३६ हजार ९ सय ९९ छ।
mobile phonesxaomi phonesxaomi pocoशाओमी पोको एक्स–३ प्रो
सेयर बजारबारे जानकारी दिने नेप्से एप, यस्ता छन् फिचरहरु
क्लबहाउसबाट कसरी पैसा कमाउने ?
यी मोबाइलमा चल्छ टेलिकमको भीओएलटिई सेवा
आजदेखि रिचार्जरमा पोर्टेबल अक्सिजन ब्याग अडर गर्न सकिने
रिचार्जरले बजारमा ल्यायो पोर्टेबल अक्सिजन ब्याग